छोराको खोजीमा | नवीन विभास | Saugat : Naya Yougbodh
4th September 2015	·0Comments
‘कहाँसम्म आमै, काठमाडौं ?’, सोधेँ । टिकट हेरेर थाहा पाए पनि औपचारिकता निभाएको उनलाई मन परेन क्यार, सिटमा बसिन् र जवाफै नदिई झ्यालबाहिर आँखा फालिन् ।
अनुहार भने सुक्खा–सुक्खा देखिन्छ, झरी पर्खिरहेको बाँझो खेतझैं ।
‘आज’नि आमैसित काठमाडौं जानु छ’, कस्तो संयोग !’, आफैलाई सोधें, ‘सिट पनि सँगसँगै ।’
धेरै भयो, यी आमै छोराको खोजीमा भौंतारिइरहेकी । जनयुद्ध सुरु भएको केही समयपछि थालिएको ‘बेपत्ता खेती’मा थालनीमै बेपत्ता पारिए उनको छोरो ।
थाहा छ, छोरो खोजीका लागि अनुनय दर्शाउन फेरि जाँदैछिन्, काठमाडौं । मनमा घरजम गरेको एउटा प्रश्न मनभित्रै तलमाथि ग¥यो, ‘छोरा खोज्ने आस कहिलेसम्म रहला ? सरकारले कुनै दिन यिनको छोरोको ज्यान वा चिहान देखाइदेला त ?’
‘दाब्रे (दायाँ) स्तन दुख्यो बा । भेट्छु कि मेर्छोरालई’, पछिल्तिरको सिटमा बस्ने यात्रु आएपछि आफ्नो कुम्लो सिटको सिरानतिर कोच्दै भनिन् । आमैलाई कसैले रेस्पोन्स गर्न नपाउँदै गाडी घोराहीबाट काठमाडौंतिर गुड्यो । गाडीको तालसँगै उनको बोली पनि गुड्न थाल्यो ।
कतिपालि घोराही–काठमाडौं गरिहोलिन्, ओहोरदोहोरमै कति पैसा सकिन्, के यी आमैसित हिसाबकिताब होला ?
आफैलाई थाहा छैन होला, अब पुग्न बाँकी कति छन्– पुलिसथाना र सेनाको ब्यारेक ।
गाडी चौघेरा पुग्यो । केही यात्रु चढे । काठमाडौं लैजाने चामल लोड गर्न गाडी अलिबेर रोकियो । चैते गर्मी खपिसक्नु छैन ।
‘मेरो छोरो यै हो । यसको नौ (नाउँ) हो, शेरे । राशको नौ (खास नाउँ, राशिको) ता शेरबहादुर हो ब’, चोलोको गोजीबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र झिकिन् । कहीं, कसैले देखेको होला कि भनेर छोरोको नागरिकता देखाउन थालिन् यात्रुलाई । वरपरका सिटमा बसेका यात्रुलाई सोध्न थालिन्, ‘कहीं देख्यौ कि हँ बा, यो मेरो लखेलाई ?’
सबका आँखा नागरिकतामा अल्झिए । सिकारु फोटोग्राफरले खिचेजस्तो । श्यामश्वेत भए पनि कालो र सेतो रङले पनि आफ्नो जात खुलेरै जनाउन नसकेको फोटो ।
अनुमानचाहिं लाउन सकिन्थ्यो कि १७/१८ को घरमा पाइला टेक्दै गरेको भर्भरको गाउँले अनुहार ।
बसको तालमा आमै पनि गुड्न थालिन् । ‘काट्मुन्नु (काठमाडौं) मा भिक्सा (भिसा) हान्नलाई लिबाङ गएर पासफोटो कि के पनि बनायो । हाम्रै गौ (गाउँ) पल्नुपट्टि सर्सुबारी मुक्खेको छोरा छ नि, डम्मर माष्टर । हो, उनले पठान्छन् भन्ने सुन्कन फाल्हाल्दै भिक्सा हान्न काटमुन्नु गया हो । अनि ता बाजो, लखेले काटमुन्नु नै पुग्न पाइन गरे भन्ने पनि सुनेँ ।’
बसका यात्रु आमैका बोली सुन्न कान थापिरहेकै छन् । उनी बोलिरहेकी छन् ।
‘मेर्ता अझ बारी थियो र अलि–अलि हातखुट्टा लाग्ने भएकाले मन हुकाउनम् कैली काटमुन्नु खोज्न जान्छु, कैली काँ’, गाउँमा आफ्नो छोराजस्तै बेपत्ता परिवारलाई सम्झदै भनिन्, ‘तर मेरो जति’नि नभएका काँ जाऊन् र ? कठै नि’, बायाँ हात झट्कार्दै भनिन्, ‘के तिनलाई आफ्ना छोराछोरीको माया नलाग्ने हो र ?’
‘अलि नेता हुनेका, भनसुन हुनेकाले ता भेटे पनि हुनन् । मेर्ता को छ र ? अब त सम्पत्ति पनि सक्किगो’, गाडी रोकिएको मौका छोपेर गादोमा राखेको सुल्पा बासा कुम्लो कोचेको ठाउँमा राख्दै भनिन्, ‘ज्यान पनि उसकै खोजीमा सिन्का भयो । अब त कतिपालि प आम्ला र ?’
अर्कोपालि फेरि खोज्न आउन पाइएला÷नपाइएला, भेउ छैन आमैलाई । यसैपालि भेटिएला भन्ने अनौठो आश झल्कन्छ उनको अनुहारमा ।
छोराको खोजीमा हिडेकी यी आमैलाई पनि एकपालि सेनाले बसबाटै लगेको रहेछ । उनको छोरालाई पनि बसबाटै लगेको सुनेकी छन् । तर कुन ठाउँको सेनाले, थाहा छैन । अर्जुनखोला, भालुबाङ, चन्द्रौटा, दाउन्ने, थानकोट, कहाँका हुन् कुन्नि ? उनलाई यत्ति थाहा छ– घोराहीबाट काठमाडौं गुडेको बसमा चढेका थिए उनका छोरा । र, बसबाटै सेनाले लग्यो । त्यसपछि अत्तोपत्तो छैन ।
मान्छे ओर्लंदा र चढ्दा आमैले छोराकै आसमा आँखा बिछ्याउँछिन् बसको ढोकातिर । मानौं, उनकै छोरो ओर्लंदैछ/चढ्दैछ ।
हेरें– आमैका अनुहारमा नजानिँदो गरी आशाका रेखा तल–माथि गरिरहेछन् । आत्मविश्वास छ– छोरो भेटिनेछ, एकबार । उनले ढुक्कसाथ भनिन्, ‘म ता आमा हुँ । उसले खाए/नखाएको, था’ पान्छु नि । सुइना (सपना) भरि ऊ मसितै हुन्छ ।’
कुनै जवाफ नफर्काई खलासी ओर्लिए । इन्ट्री गरेर गाडीमा पसे । ढोकामा उभिए । छोरो नै आएजसरी आँखा बिछ्याइरहेकी आमै जुरुक्कै उठेर हेरिन् । तर, खलासी मात्र उभिएका थिए, बसको ढोकामा । जसरी खलासी ओर्लंदाखेरि आँखा बिछ्याएकी थिइन्, उनका आँखा उसरी नै हेरिरहेछन् । मानौं, गाडीमा पासपोर्ट बोकेर उनकै छोरो भित्र पस्दैछन् ।
मानवअधिकार सम्बन्धी काम गर्ने एनजिओ/आइएनजिओ डलर फल्नेतिर मात्र आँखा लगाउँछन् । डलर त कि माओवादीका ठूला नेतामा फल्थ्यो कि सेना÷पुलिसमा ।
‘मुरी गहँ पिस्दा घुन पनि पिसिन्छ भन्छन्’, के सम्झेर कुन्नि छोरोले सिमलामा खिचाएको फोटो झिकेर आफूसँगै बसेका यात्रुलाई हात पारिन्, ‘काँ होला ? यत्ति निजो खबर पाए पनि सास जाने बेला निको गरी जाँनो भन्छु ब ।’
‘सादा जुझ्दा पाठा मरे बा’, गाडीसँगै दौडिरहेका सालघारी हेर्दै आमै बोलिन्, ‘दुःखी, गरिपगुर्बाको छोरो पनि परो ।’
थानकोट पुगेर गाडीले काठमाडौं उपत्यका चियायो । आमैका कुरा सकिएको थिएन । कसैले नसुने पनि आफैंलाई सुनाइरहिन्, आफ्नै कथा ।
‘म बड्डी (बूढी) जस्तै कति हम्ला यो मान्नाममा (संसारमा)’, आफैंलाई सोधेर हलाक् परिन्, ‘अब त आँखाबाट आँसु बग्न पनि छाडे बा । रुँदारुँदा आँसु पनि सक्किगिछ ! एकैचोटि बगेको भए मेरो आँसुले सागर नै पुग्थ्यो होला भन्छु म ता ।’
एक सातापछि काठमाडौंमा आफ्नो काम सकाएर घोराही फर्कन गाडी चढ्दा आमै बसको ढोकामा एक्लै उभिइरहेकी देखेरे सोधें । उसैगरी आँखा बिछ्याएर ठिङ्ग उभिएकी ।
थाहा छैन, यी आमै कहिलेसम्म काठमाडौं आउने हुन् ? कहिलेसम्म रित्तो फर्कने हुन् ? कहिलेसम्म जारी रहने हो खोजी यात्रा ?